ငွေသွင်းရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံး PoundSlots.com တွင်ကစားရန်မှတ်ပုံတင်ရမည်။
PoundSlots.com သည်သင်၏ဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုလုံး ၀ လုံခြုံမှုရှိစေရန်နောက်ဆုံးပေါ်စာဝှက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။
Olorra Management Limited သည် PoundSlots.com သို့ငွေပေးငွေယူဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည် - ပိုမိုသိရှိရန်
Visa၊ Visa Debit၊ Visa Electron၊ Visa Delta၊ Mastercard, Maestro, JCB, Solo, Switch, Diners Club နှင့် Discover စသည့်ကွဲပြားသောခရက်ဒစ်နှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်အမျိုးမျိုးမှငွေများကိုလက်ခံပါသည်။
သင်၏ဒက်ဘစ် / ခရက်ဒစ်ကဒ်ကို သုံး၍ ငွေကြေးအမြောက်အမြားငွေလွှဲခြင်း
တစ်ချိန်ကလွှဲပြောင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏ PoundSlots.com အကောင့်တွင်ရန်ပုံငွေများချက်ချင်းရနိုင်သည်
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - သင်၏ PoundSlots.com အကောင့်ကိုငွေဖြည့်ရန်သင်၏ PayPal အကောင့်ကိုသုံးပါ။ တစ်ချိန်ကလွှဲပြောင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏ PoundSlots.com အကောင့်တွင်ရန်ပုံငွေများချက်ချင်းရနိုင်သည်။
Paysafecard သည်အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုအတွက်ဥရောပ၏ပထမဆုံးကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ပေးသောအွန်လိုင်းခေါ်ဆိုမှုကဒ်တစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥရောပရှိဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ ဘဏ်များနှင့်အခြားဆိုင်များအပါအဝင်ကတ်များကိုသယ်ဆောင်သည့်ဥရောပရှိ 10000 ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ paysafecard ၏ကြီးမားသောကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာသင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ငွေသားကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဘဏ္financialာရေးအချက်အလက်များကိုမည်သည့်တတိယပါတီနှင့်မျှဝေရန်မလိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.paysafecard.com သို့ဝင်ရောက်ပါ။
Zimpler သည်ဖင်လန်မှဖောက်သည်များအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုပိုမိုချောမွေ့စေရန်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - စမတ်ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုအနေဖြင့်သင်လက်ခံရရှိခဲ့သည့်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတည်ပြုကုဒ်ကိုထည့်ပါ။ သင်အတွက်မည်သည့် site ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေငွေပေးချေမှုကိုမြန်ဆန်စွာလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ပေးသည့် Zimpler အကောင့်တစ်ခုကိုသင်အတွက်ဖန်တီးထားသည်။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေ - € 20 ။
သင်၏ PoundSlots.com အကောင့်ထဲသို့ချက်ချင်းငွေသွင်းရန် NETeller သည်မြန်ပြီးအလွန်လုံခြုံသောအွန်လိုင်းငွေပေးငွေယူဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
SOFORT သည်သြစတြီးယားနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုသောသူတို့၏ဘဏ်မှတဆင့်အွန်လိုင်းတွင်ငွေပေးချေနိုင်သောစျေးကွက် ဦး ဆောင်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်
SOFORT သည်အွန်လိုင်းနှင့်ငွေပေးချေရာတွင်လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်၏လုံခြုံသောအွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသောစနစ်ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း၊ အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုသင်ပေးလေ့ရှိသည်။ မှာပိုမိုသောအချက်အလက်များထွက်ရှာပါ https://www.sofort.com/.
အပ်ငွေကန့်သတ်ချက် - အနည်းဆုံး€ 20၊ အများဆုံး - € 5000
GIROPAY သည်သုံးစွဲသူများကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်မှတဆင့်အွန်လိုင်းငွေပေးချေရန် option ကိုထောက်ပံ့ပေးသောဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုသောအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
GIROPAY သည်သုံးစွဲသူများအားအွန်လိုင်းငွေပေးချေရာတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းကိုပေးသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်၏အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှတဆင့်မပြတ်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ငွေပေးချေပါ https://www.giropay.de/.
WebMoney Transfer သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေချစနစ်နှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
ဒီစနစ်ကအင်တာနက်သုံးစွဲသူများအား WebMoney ယူနစ်များ (WM-units) ကို အသုံးပြု၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီလုံခြုံစိတ်ချရသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ WebMoney အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်လည်ပတ်ရန်ဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ်အကြွေးကဒ်မရှိပါ။
ရန်ပုံငွေမည်သို့ - ငွေရှင်းကောင်တာစာမျက်နှာရှိ WebMoney ရွေးစရာကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးငွေသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါ။
သင်၏နိုင်ငွေကို WebMoney ဖြင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေးချေပါ။
ယေဘုယျအကူအညီသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာမေးခွန်းများအတွက်အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ဆက်သွယ်ပါ။ +7 (495) 727-43-33 Moscow / +7 (812) 309-02-91 Saint-Petersburg ။
လုံခြုံသောအင်တာနက်ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းစဉ်ကျွမ်းကျင်သူ Olorra Management Limited သည် PoundSlots.com သို့ငွေပေးငွေယူဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
PoundSlots.com အသင်းဝင်များသည်သူတို့၏ဂိမ်းအကောင့်များတွင်ငွေသွင်းသောအခါ Olorra Management Limited သည်ပရိုဆက်ဆာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်သင်၏အကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုငွေတောင်းခံလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုကိုသင်၏ဖော်ပြချက်တွင်အောက်ပါအမည်တစ်ခုအောက်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။